Nhau - Ruzivo rwesimbi yakasungwa waya
Kwakakurudzira Hexagonal Wire Mesh
Kwakakurudzira Welded Wire Mesh
Zivo ye welded waya pajira riya
Welded waya pajira riya is welded ne iron waya, kabhoni simbi waya. Iyo mesh gomba rakaenzana.Surface kurapwa inogona kuve yemagetsi kwakakurudzira, inopisa yakanyorova kwakakurudzira uye pvc yakavharwa. Yakanakisa anti-ngura ndeye pvc yakavharwa simbi waya mambure. Maererano nechimiro che Welded waya pajira riya, rinogona devided kupinda welded waya pajira riya mupumburu uye welded waya pajira riya Panel.
Welded waya pajira riya inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri, kurima, kuberekesa, kuvaka, kutakura, kuchera uye zvimwewo zvinhu.Sezvo zvakavharirwa nemuchina, zvivharo zvemhuka, maruva nehuni matanda, mawindo mawindo, nzira dzepassage, ehuku dzehuku, mabhasikiti emazai uye mabhasiketi ezvokudya mu imba nehofisi, mapepa emabhasikiti uye zvishongedzo
Semuenzaniso, PVC yakavharwa simbi waya pajira rinonyanya kushandiswa mumashopu esupamaketi, kushongedza kwemukati uye kwekunze, kurima huku, maruva nemiti yemadziro, yekunze inoshandiswa imba, yekugara nzvimbo fenzi yekuzviparadzanisa, ine mavara akajeka, akanaka ane rupo, anti-ngura, ita kwete kupera, zvakanakira kuramba ultraviolet, sarudzo yeuvara: girini yakasviba, huswa bhuruu, dema, tsvuku, yero uye mamwe mavara.
Hunhu hwemagetsi hwesimbi yemahara inonyanyotemerwa newaya dhayamita, yekunze dhizaini uye yakasimba sei iyo Welding iri.
1. Zvinotarisirwa pamasanganiswa ejeri:
Chekutanga pane zvese, nzvimbo yekutungidza inofanira kuve yakasimba, haigone kuve nemoto chaiwo, leakage kuwelda phenomenon. Iyo yekumisikidza poindi haina kusimba yemagetsi yekumisikidza mesh, seyakapara simbi general.Saka rudzii rwenzvimbo yekutengesa nzvimbo, inongokodzera? Semuenzaniso, maviri 3mm emagetsi kutenderera mesh, iyo yakazara kukwirira kwekaviri waya superposition ndeye 6mm. Mushure mekutenderera, iyo yekumisikidza kukwirira kwekaviri waya yekutengesa poindi inofanira kunge iri pakati pe4-5mm. Iyo nzvimbo yekutengesa haina kudzika isina waya haina kusimba, iyo nzvimbo yekumonera yakadzika kwazvo mesh inotsigira simba kushomeka, nyore kutyora.
2. Kukanganisa kudzora kwetambo dhayamita:
Iyo yakajairwa waya dhayamita kukanganisa iri mukati me ± 0.05mm. Paunenge uchitenga waya yakasunganidzwa, usangotarisa kuti mutengo wakaderera zvakadii, asi tarisa pahuremu hwechimwe nechimwe. Iko kurema kuverenga kuverenga kunogona kushandiswa kuona kana iko kukanganisa kwetambo dhayamita kuri mukati meyakaenzana renji.
3. Kukanganisa kunonzwisisika kwehukuru hwechiso:
Ikozvino kugadzirwa kwemahosi kwakakura otomatiki muchina wekutema, iko kukanganisa kwave kuri kudiki kwazvo. Nekuda kwekurovera kwesimbi panguva yekutengesa, pachave nekuwedzera kwekushisa uye kutonhora kutenderera, uye kutsauka zvine musoro kuri chokwadi kuvepo. Kazhinji, iyo diagonal kukanganisa kuri mukati mekuwedzera kana kubvisa 5mm, uye iyo yekukanganisa yekukanganisa iri mukati mekuwedzera kana kubvisa 2mm.
Chii chinonzi hexagonal waya mesh
Exhibition kunokosha chaizvo kuti kambani yedu
Kwete. 29, Taihua Street, Shijiazhuang, China